Ihe ịhụ na Santorini: nkà mmụta ihe ochie, ihe ncheta, osimiri na anyanwụ | Akụkọ Njem
Louis Martinez | | Santorini, njem
N'ezie, ịtụlela njem Hellenic agwaetiti. Ma, na nke a, ị nwekwara ike ịnọ na-eche ihe ị ga-ahụ na Santorini, ebe ọ bụ na agwaetiti a bụ nke ya ndị ịnyịnya ígwè Ọ bụ otu n'ime ihe ndị mara mma, nke ewu ewu ma nwee mmasị na njem. N'ezie, anyị nwere ike ịgwa gị na ọ pụrụ iche n'etiti ndị niile dị n'Oké Osimiri Aegean maka ọdịdị ọdịdị ala ya dị egwu yana maka ịma mma ya na uru akụkọ ya.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịchọpụta ihe ị ga-ahụ na Santorini, sonyere anyị na njem a nke na-ebido site na ebube ya, ihe ncheta ya na obodo nta ya nke ụlọ okwute ndị na-adịchaghị mma.
1 Ihe ị ga-ahụ na Santorini
1.2 Fira ma ọ bụ Thira, ihe mbụ a hụrụ na Santorini
1.5 Ọnọdụ ndị ọzọ
2 Ebe nkiri Santorini
3 Ihe ị ga-eri na Santorini
4 Mgbe ị ga-aga Santorini
5 Otu esi aga Santorini nso
Ndị bi na kemgbe narị afọ iri nke atọ BC, mmalite nke Santorini bụ nke a na-agbanye n'ọmarịcha akụkọ, nke ndị Grik masịrị ya nke ukwuu, dịka ụfọdụ echiche na-agbachitere na akụkọ ifo dị ebe ahụ Atlantis.
Agbanyeghị, site n'echiche ziri ezi, agwaetiti ahụ, dịka anyị si mara ya taa, bụ ihe fọdụụrụ nke nnukwu Mgbawa mgbawa mere n'ihe dị ka narị afọ nke iri na asaa tupu Jizọs Kraịst nke bibiri n'ụzọ dị ukwuu n'ókèala ya n'oké osimiri. Ihe ọkụ ọkụ a, nke a maara dị ka Minoan Ebe ọ bụ na ọ bụ ọchịchị ọlaọcha a na-achị agwaetiti ahụ mgbe ahụ, ọ bụ otu n'ime ndị kasị ukwuu mere na ụwa anyị n'ime puku afọ gara aga.
N'ihi ya, Santorini ewetara ụdị nke ọkara ọnwa kasị elu n'akụkụ ọdịda anyanwụ ya, ebe ị nwere ike ịhụ ọmarịcha ugwu. N'ime ime ọnwa ahụ, ebe nnukwu ugwu mgbawa dị, enwere obere agwaetiti ndị ọzọ mara oke mma ugbu a. Ihe a niile na - eduga anyị igosi gị ihe ị ga - ahụ na Santorini.
Akrotiri ihe ochie
Ọ bụ aha na-enweta nnukwu ebe ihe ochie site n'oge Minoan nke, kpọm kwem n'ihi na ugwu mgbawa kpuchiri ya, echekwara ya nke ọma. O yikwara ihe mere na Pompeii na Herculaneum na mmiri gbara gburugburu nke Italiantali.
N'ezie, ihe mbụ a hụrụ na saịtị ahụ bụ ụlọ zuru oke. Ka ọ dị ugbu a, ị ga - ahụ n’okporo ụzọ nke obodo ochie ahụ, ụdị ụlọ atọ e wuru na adobe na ihe osise mgbidi na-enye nnukwu ozi gbasara ndụ na omenala ndị bi n’obodo ahụ. Iji nye gị echiche nke ya, e nwere ọbụna fresco na-egosi ịkụ ọkpọ abụọ.
Fira ma ọ bụ Thira, ihe mbụ a hụrụ na Santorini
Thira ma ọ bụ Fira bụ isi obodo Santorini na n'ime ya ị nwere Museumlọ ihe ochie mgbe ochie, nke mejupụtara nleta gị na saịtị gara aga, ebe ọ bụ na ọ nwere ọtụtụ akụkụ seramiiki na ihe ọkpụkpụ a hụrụ ebe ahụ. Ọ bụghị naanị ụlọ ngosi ihe nka dị na obodo ahụ. Also nwekwara Akụkọ mgbe ochie; mmanya ahụ na nke ga-adọrọ uche gị: nke Byzantine Musical Instruments Museum.
Mana Fira nwekwara ọtụtụ ihe ncheta n'agbanyeghị na ọ pere mpe. N'ihi ya, ya Katidral orthodox, ezigbo ihe ijuanya nke ọdịdị gbara gburugburu, mgbidi ọcha na ụlọ mgbịrịgba dị egwu. N'ime, ị nwekwara ike ịhụ frescoes mara mma nke Christóforos Assimis. Na kwa Katidral katidral, nke ị ga-eru site na ahụkarị cobbled n'okporo ámá nke obodo.
Fira ma ọ bụ Thira
Ọ bụghị nanị ha bụ ụlọ nsọ na Santorini. Naanị na Fira, e nwere ihe dịka narị ụka Byzantine narị anọ na-anọchi anya ndị nwe ala ha. Banyere obodo ije, pụta ìhè na gyzis obí eze, ọmarịcha ụlọ obibi nke narị afọ nke XNUMX nke nwere ebe ngosi nka nka.
Obodo nta a dị ugbu a na isi obodo, ma ọ dị ntakịrị karịa, na nke a na-akpọ Mbara ihu Santorini. N'ihi nke a, ọ na-enye gị nnukwu echiche banyere n'ọnụ mmiri, ọkachasị mgbe anyanwụ dara. Ndị bi n’ógbè ahụ na-ekwu na a pụrụ ịhụ ha site n’ebe ahụ anyanwụ kacha mma n'ụwa ndien mmọ ẹnyene ndusụk ntak.
Ihe dị ka iri na otu kilomita site na isi obodo, n'ebe ọdịda anyanwụ nke agwaetiti ahụ, ọ na-enyekwa gị echiche dị ebube, na nke a ọmarịcha ugwu. Itslọ ya ndị nwere ọmarịcha mgbidi na uko ụlọ ndị yiri ọmalịcha na-acha anụnụ anụnụ ga-adọrọkwa mmasị gị.
Egwuregwu Ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri kacha mkpa n’àgwàetiti ahụ na Kamari O nwere osimiri kachasị ewu ewu na ya. Maka akụkụ ya, emborio O nwere nnukwu ụlọ ochie na ọ bụ ebe a na-emepụta mmanya Santorini a ma ama yana Onyinyechukwu. Na njedebe, Perissa guzo maka oke aja aja ojii.
Katidral Ọtọdọks nke Fira
Ebe nkiri Santorini
Ọ bụghị naanị na ị nwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ na Santorini. I nwekwara ike ime ihe na-adịghị agwụ agwụ. Otu n'ime iwu bụ ụgbọ mmiri gaa na ndagwurugwu nke ugwu mgbe ochie. N’elu agwaetiti ya, ị nwere ike ịgagharị n’ime ala lava ojii wee hụ ndagwurugwu ahụ. Na mgbakwunye, ịnwere ike ịsa ahụ na mmiri ọkụ na mpaghara ahụ.
Ahụmahụ ọzọ nke na-enye gị echiche na-enweghị atụ na-ewere Cableway nke jikọtara Fira na ọdụ ụgbọ mmiri ochie ya. A pụkwara ime njem a site na ịnyịnya ibu, nke a na-ahụkarị n'etiti ndị njem nleta. Otú ọ dị, e nwere ndị na-adịghị amasị ya n'ihi na ha na-ewere ya iji anụmanụ anụmanụ.
O nwekwara Santorini ụzọ ụkwụ. Ihe kachasị ewu ewu bụ nke na-esonye Oia ya na Imerovigli N’okporo ájá nke jupụtara na ugwu. Ma, n'otu aka ahụ, ụsọ osimiri agwaetiti ahụ zuru oke maka ịmegharị mmiri na nsị.
Nleta nke Santorini wineries na ubi vaịn ma ọ bụ mee ụzọ nke osimiri Ha bụkwa ọrụ ị nwere ike ime n'agwaetiti ahụ. Aja ndị a gụnyere aja ojii nke Perissa, nke anyị kwurula; Oké Osimiri Uhie, nke dị nso Akrotiri, ma ọ bụ White Beach, na-esote nke gara aga. Ebe ndị a nwekwara ndụ ndụ abalị. Ma ị ga-anwale gastronomy nke Santorini.
Ihe ị ga-eri na Santorini
Ozugbo anyị kọwaara ihe ị ga-ahụ na Santorini, anyị ga-elekwasị anya na nri ya dị ụtọ, nke dịkwa mkpa na njem ọ bụla. N'ụzọ ezi uche dị na ya, nri agwaetiti bụ akụkụ nke nri Mediterranean, ya na mmanụ olive, na miel na tomato dị ka isi ya.
Ahụkarị nri ị ga-anwa ileta Santorini bụ ewu ewu moussaka, nke nwere anụ, aubergines, mmanya na-acha ọbara ọbara na cinnamon; Ihe dị iche salads nke enwere cheese mgbe nile; ihe dolmades, stew nke eji akwukwọ osisi vaịn akwadebe; ihe avgolemono, osikapa na ọkụkọ, lemon na àkwá, ma ọ bụ soulaki, nke yiri nke anyị Moorish skewer.
Dị ka aperitif, ndị kef gị, ụfọdụ anụ bọọlụ na itch. Ma, dị ka ndị sauces, na tzatziki, nke nwere yogọt, galik, dil, kukumba na mmanụ oliv.
N'ikpeazụ, gbasara ihe ọ dụessụ, nri Santorini nwere ọrụ dị mkpa. mkpụrụ osisi ọhụrụ. Ma na sirop, a na-akpọ efere gbachi nkịtị. Hụrụ ụtọ bụ baklava, mmanụ a honeyụ, puff achịcha dị iche iche, vanilla na achicha almọnd; ihe moustalevriá, achicha kwadebere na greepu ga; ihe loukoumades, mmanụ a honeyụ, puff pastry na cinnamon bun, na karidopita, a ukpa achicha na brandi sirop.
Enwere ike ịsachasị ihe niile a na mmanya Santorini. Na, maka iri nri, ị nwere oyi na ozo, ma mmanya anise.
Mgbe ị ga-aga Santorini
Agwaetiti Greek nwere a agafeghị oke ihu igwe Mediterranean, jiri nwayọọ na oge oyi. Oge mmiri na-acha anwụ na-acha na okpomọkụ dị gburugburu ogo iri atọ na nkezi. Ọbụna ọnwa Ọktoba na Machị dịtụ ọkụ.
Banyere mmiri ozuzo, ha dị ụkọ ma na-elekwasị anya na Jenụwarị na February. Ya mere, oge ọ bụla dị mma ka ị gaa Santorini. Mana ma eleghị anya, ọnwa ndị kachasị mma june na septemba. Agwaetiti ahụ dị jụụ ma ihu igwe ka dịkwa n'oge ọkọchị.
Agwaetiti cycladic nwere a ọdụ ụgbọelu nke ụgbọ elu na-abata site na ụfọdụ obodo Spanish, ọkachasị n'oge ọkọchị site na ụgbọ elu ụgbọelu. Nwekwara ike ịhọrọ ịgbaga Atens ma ọ bụ Krit wee rute Santorini site na uzo.
Ga site na ọdụ ụgbọ elu na Fira na, na mkpokọta, ịgagharị n'àgwàetiti ahụ, ị ​​nwere ahịrị ụgbọ ala nke ahụ na-agwa ndị isi obodo ya okwu. Otú ọ dị, kpachara anya ka ị ghara inwe mgbagwoju anya n'ihi na okporo ụzọ ndị ahụ, ọ bụ ezie na ha dị mma, dị warara ma jupụta na eriri.
Na mmechi, ị marala ihe ị ga-ahụ na Santorini. Na otu esi aga ebe ahu na ihe bu isi nri nke gastronomy ya. Dị nnọọ mkpa iji nweta gị tiketi ileta a ebube nke Mediterranean.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Santorini » Ihe ị ga-ahụ na Santorini